Usoro kachasị mma iji rite uru na OnePlus 5T | Gam akporosis
Usoro kachasị mma maka OnePlus 5T
Eder Ferreño | | Mobiles, Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Otu n'ime ekwentị ndị na-eguzosi ike na ọdịda a bụ OnePlus 5T. E gosipụtara ọhụụ ọhụrụ dị elu nke ndị China n'ihe dị ka izu atọ gara aga ma kemgbe ahụ ọ kwụsịbeghị ijide isi akụkọ. Ọ bụ ngwaọrụ nwere zụlitere ọtụtụ atụmanya na na o nwere ihe niile ga-abụ onye kacha ere ahịa. Yabụ na ọ nwere ike ịre nke ọma na ekeresimesi a.
Mana, dị ka ọ dị na ekwentị niile, enwere mgbe niile ụfọdụ aghụghọ iji nweta ọtụtụ n'ime ya. Otú ahụ ka ọ dịkwa na OnePlus 5T. Ya mere, anyị hapụrụ gị na aghụghọ kachasị mma maka OnePlus 5T.
N'ihi aghụghọ ndị a, ị ga-enweta ihe na ngwaọrụ nke akara China. N'ihi ya, gị ọrụ ahụmahụ o doro anya na ụba.
1 Mepee igwefoto ngwa ngwa
2 Ihuchi mkpọchi
3 Mee ọ rụọ ọrụ ọnọdụ abalị
4 Gbanwee ngwa ndị mepere site na ndabara
5 Mmegharị ọsọ ọsọ
6 Hazie ogwe dị n'okpuru
7 Hazie launcher na akara ngosi
Mepee igwefoto ngwa ngwa
Ọ bụrụ na ịchọrọ see foto ngwa ngwa anyị kwesịrị ụfọdụ ụdị shortcut ka ọ dịkwuo mfe. Onye OnePlus 5T na-enye anyị nhọrọ ahụ. Nwere ike rụọ ọrụ igwefoto site na ịpị bọtịnụ ike ugboro abụọ. Ọ dị ezigbo mma ma dịkwa mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịse foto n'otu oge. Anyị ga-agarịrị Ntọala> Mmegharị ahụ ma anyị nwere ike ịgbalite ya ka ọ masị anyị.
N'ezie, anyị chọrọ ichedo ngwaọrụ anyị dịka o kwere mee. Yabụ, anyị nwere ike itinye usoro nche na mkpọchi mkpọchi. Ihe dị mma bụ na ngwaọrụ ahụ na-enye anyị nhọrọ ịhọrọ nke kachasị amasị anyị. Anyị nwere ike iji ụkpụrụ, PIN ma ọ bụ jiri ojiji mkpịsị aka ma ọ bụ ihu ihu. Họrọ nke kachasị amasị anyị dị mfe dịka ịga: Ntọala> Nche.
Mee ọ rụọ ọrụ ọnọdụ abalị
Ihe na - adị mma mgbe niile ma dịkwa mma ma ọ bụrụ na anyị ejiri ekwentị n’abalị. Nwere ike gbanwee ncha ihuenyo idobe ya pere mpe. Na OnePlus 5T anyị nwere ike ịgbalite ọnọdụ abalị na oké udo. N'ihi ya, ìhè ihuenyo ga-enye anyị nsogbu. Naanị anyị ga-aga: Ntọala> Gosiputa> Nightkpụrụ abalị. N'ebe a, ọnọdụ abalị a na-arụ ọrụ na ngwaọrụ.
Gbanwee ngwa ndị mepere site na ndabara
Maka ọtụtụ ndị ọrụ ọ bụ ihe na-akpasu iwe. Ọ dabara, anyị nwere nhọrọ iji gbanwee nke a na OnePlus 5T. Ntọala> Ngwa (Ngwa)> Ndabere bụ ụzọ ị ga-eso iji mezuo nke a. Site n'ebe ahụ anyị nwere ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ emeghe na ndabara, ma ọ bụ maka otu omume ma gbanwee ihe niile anyị chọrọ.
Mmegharị ọsọ ọsọ
na mmegharị ahụ́ pụrụ ịba nnọọ uru. Ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịnweta ngwaọrụ ma ọ bụ ngwa dị iche iche na ngwaọrụ ahụ. The OnePlus 5T na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ iji hazie mmegharị a. Anyị nwere nhọrọ nke hazie mmegharị ụfọdụ imeghe ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ n'ụzọ dị otú a na ekwentị. Site na Ntọala> Mmegharị ahụ anyị nwere ike ịhazi ihe niile masịrị anyị n'ụzọ dị mfe.
Hazie ogwe dị n'okpuru
Nhọrọ ọzọ bara uru bụ hazie ogwe dị ala nke OnePlus 5T. Ntọala> bọtịnụ bụ ụzọ ị ga-esi mee ya. N’ebe ahụ ka anyị nwere ike ikpebi etu anyị chọrọ iji ogwe aka ala wee nweta ọtụtụ ihe na ya. Nhọrọ dị ọtụtụ. Ya mere, ihe kacha mma bụ họrọ dabere n’otú anyị si eji ekwentị. Yabụ, iji ya eme ihe ga-adịrị anyị mma karị.
Hazie launcher na akara ngosi
OnePlus pụtara mgbe niile maka ịbụ otu n'ime ụdị nke na-enye nhọrọ nhọrọ ịhazi ndị ọzọ nye ndị ọrụ. Anyị nwekwara ike hazie launcher na akara ngosi Nke ngwaọrụ. N'ihi ya, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe ekele maka. Naanị anyị ga-aga isi ihuenyo na jigide ya. Ọzọ anyị na-enweta nhọrọ dị iche iche (akwụkwọ ahụ aja, ntọala na wijetị). Ọ bụrụ na anyị tinye ntọala anyị nwere ọtụtụ nhọrọ nhazi. Anyị nwere ike isi na ịgbanwe launcher itinye akara ngosi ọhụrụ ma ọ bụ gbanwee eserese.
Ndị a bụ aghụghọ kachasị mma maka OnePlus 5T. Anyị nwere olile anya na ekele ha ga-adịrị gị mfe iji ekwentị ekwentị. E wezụga ike nweta ọtụtụ ihe na njedebe a na-eji ha. Kedu ihe ị chere maka aghụghọ ndị a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Usoro kachasị mma maka OnePlus 5T
Budata akwụkwọ ahụ aja nke Huawei Mate 10 Pro
Youtube ga-amalite ọrụ ndenye aha ọhụụ: Red + Play Music